လင်းပိုင် Browser ကို | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » လင်းပိုင် Browser ကို
လင်းပိုင် Browser ကို APK ကို
လင်းပိုင် Browser ကိုမြန်ဆန်စွာတင်အမြန်နှုန်း, browsing နဲ့ flash ကိုကစားသမားရုပ်ဖျက် HTML5 video player ကို, Adblock, tab ကိုဘား, sidebars တလျောက်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး Internet Explorer browser တခုဖြစ်တယ်။ အသုံးပြုသူများသည်လင်းပိုင်၏, အစာရှောင်ခြင်းစမတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Web ကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးတာနဲ့ပုံမှန်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်တူခံစားရ၏။
Android Market ကိုအပေါ်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းက်ဘ်ဘရောက်ဇာ
Android နှင့် iOS အပေါ် 150,000,000 downloads, ကျော်
✔ Flash Player ကို
✔ Fast Download,
✔ Incognito / ပုဂ္ဂလိက Browsing
လင်းပိုင် Browser ကိုအပေါ်ကို Android ထောက်ခံမှုများအတွက်ကစားသမားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂိမ်းနှင့် HD ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံကိုရယူပါ။
လင်းပိုင်ဗီဒီယိုနှင့်အတူ, သင် Youtube, Dailymotion တို့ကို, Vimeo, Twitch နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခြားဗီဒီယိုအားက်ဘ်ဆိုက်ကနေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ!
လင်းပိုင် Browser ကိုအကောင်းဆုံးကို AdBlock Browser ကိုတစျဦးဖွစျသညျ။ Adblock နှင့်အတူ, သငျသညျသည် popups, ကြော်ငြာတွေ, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ & ကြော်ငြာဗီဒီယိုများပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
Adblock add-on ကိုဒီမှာရှာပါ: Alturl.com/27rch
★ အကွိမျမြားစှာ tabs များဘား
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပွင့်လင်း tabs များပြသထားပြီး, သငျသညျပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အကြားအကူးအပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကို PC Browser ကို & desktop ကို browser ကိုအဖြစ်ဝဘ် browse ကြပါစို့။
ဒါဟာမျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အစွန်ကနေညာဘက်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်နှင့်သင့် bookmarks ကိုနှင့် browsing history ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်း, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Video Downloader, PDF ဖိုင်မှ Web ကိုနှင့်လင်းပိုင် Translate အဖြစ် add-ons တွေကို, အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုခံစားနိုငျ
အလွယ်တကူစသည်တို့ကို Google က Yahoo, Yandex, Bing, Duckduckgo အတူ search engine ကိုအကူးအပြောင်း
★ အစာရှောင်ခြင်း download,
Video Downloader နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုကနေအစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းလျှံနှင့်အတူ HTML5, Flash ကိုဗီဒီယိုတွေကို Download လုပ်ပြီးပို။ သင်တို့သည်လည်းအလွယ်တကူဖိုင်မန်နေဂျာအတွက်ဆွဲယူတဲ့ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
★ incognito / ပုဂ္ဂလိက browsing အတွက်
လင်းပိုင် Browser ကိုမည်သည့်သမိုင်း data တွေကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲသငျသညျကိုမှန်ကန်ပုဂ္ဂလိက browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကကမ်းလှမ်းတဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့ Browser ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့သမိုင်း, စာညှပ်များ, နှင့် passwords ထပ်တူပြုပါ။ Plus အားအလွယ်တကူဖွင့်ထားနှင့် Chrome, Firefox နှင့်လင်းပိုင် Connect ကို အသုံးပြု. ဆာဖာရီအပါအဝင်က Android, iPhone, iPad မိုဘိုင်း & pc browser ကိုဖြတ်ပြီး tabs များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွန်း။ သင်ပင်အကြောင်းအရာ Android အတွက် Flash Player တွေနဲ့ဒက်စ်တော့ဘရောက်ဇာကနေတွန်းခံစားနိုင်။
ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ဘုံ features တွေတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမူအရာဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနည်း။ ဥပမာအားဖြင့်, Bing မှသှားဖို့ Duckduckgo သို့မဟုတ် "B က" ကိုသွားကြဖို့တစ်အက္ခရာ "D:" drawing ။
လင်းပိုင် Browser ကိုသင်စကားပြောနိုင်သည်အနေနဲ့အမှန်တကယ် web browser ကိုပေးသည်။ , သင်အနှစ်သက်ဆုံးလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ရှယ်ယာရှာဖွေသင့်အသံကိုသုံးပါအကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ bookmark, သင်၏ဖုန်းတွင်ဝဘ် navigate ။ ပင်ကို Yahoo, Bing သို့မဟုတ် Duckduckgo အတူစာရိုက်စရာမလိုဘဲရှာဖွေသည်။
မည်သည့်စတိုင်သို့မဟုတ်ခံစားချက်ကိုက်ညီဖို့နောက်ခံပုံများစာကြည့်တိုက်အတွက်နောက်ခံ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်သင်၏လင်းပိုင် Browser ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
★ quick ဝေမျှမယ်
လင်းပိုင်သင်အလွယ်တကူ Facebook, Twitter WhatsApp ကို, Skype နဲ့ပိုပြီးမှအကြောင်းအရာများဝေမျှကူညီပေးရန်ရန်သင့်အများဆုံးမကြာသေးမီကအသုံးပြုသော apps များအောက်မေ့။
လင်းပိုင် Add-ons တွေကို
- လင်းပိုင်ဗီဒီယိုပလေယာ - Flash Player ကို;
- မျက်နှာပြင်ဖြတ် - Screenshot app ကို;
- PDF ဖိုင်ရယူရန် Converter & Editor ကိုမှ Web ကို;
- လင်းပိုင် Jetpack;
- Android အတွက်မြန်နှုန်း Booster;
- လင်းပိုင် Translate - Translator;
- လင်းပိုင်ဖို့အတွက် QR & ဘားကုဒ် Scanner;
- လင်းပိုင် Reader ကို;
- Bookmarks Widget လေး;
- လင်းပိုင် Tab ကိုပြန်တင်ရန်;
- လင်းပိုင် Show ကိုအိုင်ပီ;
- လင်းပိုင် Ultimate အလံ;
- လင်းပိုင်အဘို့အ Pocket;
- လင်းပိုင်အဘို့ကို Dropbox;
- လင်းပိုင်အဘို့အ Box ကို;
- လင်းပိုင် Alexa Rank ။
facebook.com/DolphinFans: အလင်းပိုင်ရဲ့ Facebook Fan page ကို join
Twitter တွင်လင်းပိုင်ကိုလိုက်နာပါ: twitter.com/#!/DolphinBrowser
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ: dolphin.com/
မူလစာမျက်နှာ UI ကိုတိုးတက်မှု [Fixed] ။
လင်းပိုင် Browser ကို - မြန်ပုဂ္ဂလိက & ဒီနေရာမှာ Adblock
21.37 ကို MB
Vandana Mahawer says:
အောက်တိုဘာလ 18, 2014 မှာ 7: 59 ညနေ
ရွက်တိုင် site ကိုသူ
မေလ 3, 2014 မှာ 11: 07 ညနေ
မေလ 3, 2014 မှာ 11: 04 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2013 မှာ 6: 07 နံနက်